Gym ကစားခွင့် @ Body Fitness Gym
၀၇-၀၂-၂၀၁၈ မှ ၁၂-၀၃-၂၀၁၈ ထိ
Bodyfit Gym ၏ လိပ်စာ
:	အမှတ်(၅/၁)၊ သံသုမာလမ်း၊ သုဝဏ္ဏ-သင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
: ၀၉- ၇၆၈၆၈၂၅၅၃၊ ၀၉-၇၆၈၆၈၂၅၅၄၊ ၀၉-၄၂၀၂၃၉၀၁၈
: နံနက်(၆)နာရီ မှ ည(၉းဝဝ)နာရီထိ
Facebook Page : https://www.facebook.com/bodyfitgymygn/
Bodyfit Gym ၏ အမှာစကား
အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ။ Bodyfit Gym မှ ဖြစ်ပါတယ်။
Bodyfit Gym တွင် ကစားနိုင်မည့် gym ကစားခွင့်ကူပွန် များ ကို ကံထူးရှင် (၁၉)ဦးအတွက် မဲဖောက်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကံစမ်းပေးမှုအတွက် အားလုံးကို ကျေး ဇူး အထူး တင်ရှိပါတယ်။ ပါဝင်ကံစမ်းသော မိတ်ဆွေများကိုလည်း Bodyfit Gym မှ နွေးထွေးစွာ ဖိတ်ခေါ်အပ် ပါ သည်။
မိတ်ဆွေ သင်ဟာ gym ကစားဖို့ စိတ်အားထက်သန်နေသူတစ်ယောက်ပါလား?
gym တော့ကစားချင်ပါရဲ့... ခေတ်မီ စက်ပစ္စည်းတွေ ရှိနေတယ့် gym မှာမှ ကစားချင်တာ... နောက်ပြီး ၀န်ဆောင်မှူ လည်းကောင်း ၊ Trainer တွေရဲ့ customer service ကောင်းမွန်တဲ့ gym မျိုးလေးဆို ပိုကစားချင်တယ်... ဈေးနှူန်းကလည်း fair ဖြစ်ရင် ပိုပျော်ပြီလေဆိုတဲ့ ချစ်သော customer များအတွက် အမိုက်စား gym လေးတစ်ခုကို မိတ်ဆက် ပေးချင်ပါတယ်...
သူ့နာမည်လေး ကတော့ အားလုံးချစ်တဲ့ Bodyfit Gym ပါခင်ဗျာ.... ဟုတ်ပါတယ် Body်fit Gym မှာဆိုရင် စက်ပစ္စည်းစုံစုံလင်လင် နဲ့ ဆော့ချင်သူcustomer များအတွက် နောက်ဆုံးပေါ် ခေတ်မှီ စက်ပစ္စည်းတွေနဲ့ အမိုက်စား ဆော့လို့ရမှာနော်...
Members Fees ကလည်း သိပ်မများပဲ တစ်လကို 55000 ks ထဲဆိုတော့ ဈေူးနှူန်းကလည်း fair ဖြစ်ပြီးသား... Promotion အနေနဲ့ကတော့ ၆လ ကစားရင် ၁၅% နဲ့ ၁၂လကစားရင် ၂၀% discount ရှိပါတယ်နော်... ဒါ့အပြင် အထူး အစီစဉ်အနေဖြင့် အလုပ်မအားသော သူများအတွက် ၁၀ရက် ကဒ်ဖြင့် ကစားနိုင်ပါသေးတယ်.. Body Fit Gym မှာ Gym class အပြင်...
♦ Fitness Dance
♦ Cardio Fit Burn
Power Step အားလုံး ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ အတွက် တစ်နေရာတည်းမှာတင် ဆော့ကစားလို့ ရပါတယ်ခင်ဗျာ..
Service ပိုင်းကတော့ လုံးဝ ပြောစရာမလိုအောင် ကောင်းမွန်ပြီး အတွေ့အကြုံရင့် Trainer များဖြင့် customer service ကို အပြည့်အ၀ ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ... နောက်ထပ် ၀န်ဆောင်မှူအနေနဲ့ ချစ်သော customer များအတွက် sauna ခန်းနဲ့ changing room ,Locker တွေပါ ထားရှိထားပါသေးတယ်နော်... ဒါ့အပြင် ကျယ်ဝန်းသော ကားပါကင် လည်းရှိတာမို့ ချစ်သော customer များအတွက် ကားရပ်နားရန်လည်း အဆင်ပြေ ပါတယ်ခင်ဗျာ... Gym ကစားနေစဉ်မှာလည်း မောလို့မောမှန်း၊ ပြိုင်းလို့ပြိုင်းမှန်း မသိအောင် မြူးကြွတယ့် သံစဉ်တီးလုံး အလန်းစားတွေနဲ့ ပံ့ပိုးသွားမှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်နော်...
Body Fit Gym ရဲ့ အဓိက အားသာချက် ကတော့ gym လာကစားသူ မိဘပြည်သူများ အားလုံးကို မိမိရဲ့ ဆွေမျိုးရင်းချာ မိသားစုသဖွယ် (Family Type) ဆက်ဆံပြီး ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ ဆော့ကစားနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်... အထူးအစီအစဉ် အနေဖြင့် ပျော်ပျော်ပါးပါး တစ်နှစ်တစ်ခါ ခရီးထွက်ခြင်း trekking များလည်း ရှိပါသေးတယ်နော်...
Bodyfit Gym ၏ အားသာချက်များ
ခေတ်မီ စုံလင်သော အမေရိကန် နိုင်ငံထုတ် ကမ္ဘာကျော် Brand များကိုသာ အသုံးပြုထားခြင်း
Sqft 4000 ရှိ ကျယ်ဝန်းသော Fully Air-Conditioned အားကစား ခန်းမ ပါရှိခြင်း
သွားလာရ လွယ်ကူပြီး အချက်အချာ ကျသော နေရာတွင် တည်ရှိခြင်း
အတွေ့အကြုံရှိ ဝါရင့် ဆရာများမှ စိတ်ရှည် နည်းလမ်း မှန်ကန်စွာ တစ်ဦးချင်းအပေါ် ဂရုတစိုက် သင်ကြားပေးခြင်း
အမျိုးသား အမျိုးသမီး သီးသန့် အသုံးပြုနိုင်သော ရေပူရေအေး ပါရှိသော ရေချိုးခန်းများ၊ Toilet ၊ အဝတ်လဲခန်းများနှင့် Locker များ ပါရှိခြင်း
ကျန်းမာရေးအတွက် အထောက်အကူ ပြုပေးနိုင်သော အမျိုးသား အမျိုးသမီး သီးသန့် ချွေးထုတ်ခန်းများ ပါရှိခြင်း
Weight Gain Plan/ Weight Loss Plan နှင့် Nutrition Plan များကို ဝါရင့် ဆရာများမှ စနစ်တကျ ပြသပေးခြင်း